तपाइले राजनीति कहिलेदेखि सुरु गर्नु भयो -
नेपाल विद्यार्थी संघ मार्फ २०३३ सालदेखि सुरु गरे । त्यतिवेला म ने.वि.संघ तदर्थ समिति पर्वतको सदस्य थिए ।
जिल्ला कार्य समिति पर्वतको सचिव र अध्यक्ष भए । त्यतिवेला राजनीति गर्न धेरै गाह्रो थियो । लुकिछिपि संगठन गर्नु पथ्र्यो ।
यो चालीस सालभन्दा पहिलाको कुरा हो हैन - त्यसपछि के के गर्नु भयो -
त्यसपछि म काठमाडौंमा आए । सरस्वती क्याम्पसमा आइकममा भरना भए । क्याम्पस इकाइको सचिव भएर ने.वि. संघको केन्द्रीय स्तरको राजनीति सुरु गरे ।
तपाइले शिक्षक राजनीति पनि त गर्नु भयो नि हैन त -
हो । प्रजातन्त्रवादी शिक्षक संघको काठमाडौं जिल्लाको अध्यक्ष देखि केद्रको् सचिव ,माहासचिव, उपाध्यक्ष भए ।
कठिन अवस्था देखि अहिले सम्म कांग्रेसभित्रै रहनृु भयो -
मेरो सहभागिताकोर् इतिहासले त त्यहि देखाउ छ ।
तपाइको कांग्रेससंगको सहभागिता के -
पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेसको भातृ सस्था ने.वि.संघ र सभेच्छुक सस्था शिक्षक संघमा काम गर्नु नै कांग्रेससंगको सहभागिताको निरन्तरता हो । दोस्रो कुरा अहिले म माहाधिवेशन प्रतिनिधि र शिक्षा विभागको सचिव छु । केद्रमा समन्वय र संगठन विभागको सदस्य भइसकेको छु ।
जिल्लामा के हुनु हुन्छ -
पार्टर्ीीे जिल्लामा मौका पाइसकेको छैन । सायद जिल्लामा सहभागि हुने योग्यता वनी सकेको छैन होला ।.-हास्दै)
यो यात्रामा जेल पनि पर्नु भएको छ -
चुक्ने कुरै छैन ।
प्रहरीको चुटाइ पनि खानु भएको छ -
यसको पनि राम्रो अनुभूति छ ।
यति धेरै पार्टर्ीींगठनका कामहरु गर्दा तपाइलाई वेहोर्ने साक्षीहरु पनि छन् -
होलान् । पेटमा धर्म भएका जसले मलाइ नजिकवाट देखे र खुरापातको राजनीतिमा विश्वस राख्दैनन् उनिहरु मेरा साक्षीहरु हुन् ।
नमिठो अनुभूति पनि त होलानि -
छन् । सामन्तहरुले मेरो झुपडि फ्याकि दिएका छन् तिनिहरु अहिले पनि जिउँदै छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल्य र मान्नेता वोकेको पार्टर्ीीे राजनीतिको सुरुवात सगारठेलामा वसेर गरेको छु । जातिय रुपमा अपमानित भएर नारायण मा.वि.को शिक्षकवाट निकालिएको छु । होटलमा भात खाएर निस्के पछि भाडा माझेन भनेर लाठा लिएर आएको वेहोरेको छु । वास पाएको छैन । अभाव, गरिवी र विपन्नताको अनुभूति छ मसंग । थुप्रै अपमानहरु सहेको छु ।
अहिल तपाई राससको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन -
तपाई पेशाले त शिक्षक होइन र -
हो , पेशाले शिक्षक हुँ । पेशा पत्रकारिता होइन तर पत्रिकाहरुमा लेखहरु लेख्नेमा म पनि पुरानो व्यक्ति हुँ ।
तपाईलाई खरो लेखक भन्छन् हैन -
यो मरो लेख पढ्नेहरुको मूल्यङ्कन हो ।
तपाई कत्तिको पढ्नु हुन्छ नि -
मेरो अहिलेसंमको उपलब्धि नै मेरा अध्यन हो । म मेरो व्यक्तिगत पुस्ताकलयमा दैनिक केहि घण्टा पढ्छु ।
तपाईलाई राससमा तपाईको क्षमता हेरेर ल्याएका हुन्कि दलित भनेर -
यो मलाई थाहा छैन । म शिक्षक संघको माहासचिव भए तर दलित भएर होइन । पर्वत जिल्लाको ने.वि.संघको अध्यक्ष पनि दलित भएर भएको होइन । त्यतिवेला परिस्थिति सहज थिएन त्यो असहज परिस्थितिमा म होमिएको थिए । अहिले पद कसैले सजिलै छोड्छ - दलितभित्र पनि क्षमता भएका मानिस छन् भने ल्याउनर्ुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार मलाई पार्टर्ीीराससमा ल्याएको हुनसक्छ ।
तपाई राजनीतिमा किन लाग्नु भयो -
समाजको रुपान्तरण गरेर समाजवादी समाजको स्थापना गर्न सकिन्छकि भनेर राजनीतिमा लागियो । मेरो राजनीतिक अभियान ब्राहृमणवाद र सामन्तवादका विरुद्ध हो । हाम्रो सम्पूण समाज ब्राहृमणवाद र सामन्तवादले जेलिएको छ । ब्राहृाणवादको फुटप्रस्त सुत्रद्वारा हाम्रो समाज चलेको छ । त्यसैले समाजको रुपान्तरण हुन जरुरी छ ।
ब्राहृमणवाद र सामन्तवादको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेस उपयुक्त पार्टर्ीीो त -
कसैकसैले होइन भन्छन् तर ब्रकहृमणवाद र सामन्तवादको शत्रु पार्टर्ीीेपाली कांग्रेस हो भन्ने कुरमा म विश्वस्थ छु । किनभने जमिन जोत्नेको भन्ने पार्टर्ीीेपाली कांग्रेस हो । वाहुको किरिया नगर्ने नेता वि.पि.कोइरालाको पार्टर्ीीेपाली कांग्रेस हो । वाहुनलाई हलो जोताउने पार्टर्ीीेपाली कांग्रेस हो । पहिलो पटक पशुपतीमा दलितलाई प्रवेस गराउने नेतृत्व गर्ने पार्टर्ीीेपाली कांग्रेस हो । कुनै व्यक्ती नेपाली कांगे्रस होइन । व्यक्तीका कुरा गर्ने हो भने २०३९ सालमा वाहुनकि छोरीलाई दलित शिक्षकले गालामा हान्यो भनेर हाम्रै कांग्रेसी व्यक्तीहरुको सक्रियतामा निकालिएको शिक्षक हुँ म । सायद उनिहरु अहिले पनि कांग्रेसको मतदाता होलान् । सिद्धान्तका अगाडी व्यक्ती गौढ हुन्छ ।
कम्युनिष्ट किन हुनुभएन -
कम्युनिष्ट हुन सकिन । वि.पि.ले भनेको समाजवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुन्छ र प्रजतन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद हुन्छ । मेरो पहिलो स्कुलिङ यहि हो । हुन त मलाई तोयानाथ चालिसेले साम्यवादी दर्शन र साहित्य आफ्नो कोठामा राखेर धेरै पढाउनु भएको थियो । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले सारै असल र प्रतिवद्ध मानिस हो उँहा । उँहा मेरो जात मोचन गर्ने दोस्रो व्यक्ती हो । वाहुनको घरको चोटामा मलाई लाने दोस्रो व्यक्ती हो उँहा । उँहा र कृष्ण प्रसाद भट्टार्राई उँहाहरु भूमीगत हुदा मेरो घरमा लुक्नुभएको छ ।
तपाईको जात मोचन गर्ने पहिलो व्यक्ती को हो नि -
धनञ्जय शर्मा अधिकारी । उँहा अत्यन्तै प्रगतिशील विचारको व्यक्ती हो । वाहुनको भान्सामा पहिलो पटका उँहाको भान्सामा खाएको छु । र मैले खाएको भाडाहरु वैनी सरस्वतीले पखालेकि छन् । मलाई जातीय हिनतावोदवाट माथी उठाउने प्रमुख व्यक्ती हो उँहा । यसले मेरो मनोवल निकै वढायो ।
जातका कारणले पनि दुःख पाउनु भएकोछ -
मेरो आजसंमको पिडा नै यहि हो । मैले कतिठाउमा वास पाएको छैन । मेरो ज्यानको समेत जोखिम भएको छ । यो घटना सालिजामा भएको हो । वसेको ठाउवाट रातीनै भागेर मुडेको वनमा रात विताएर घर फर्केको छु । ऋषीकेश तिवरी र म कुश्मा वजारको एउटा होटलमा खान खाएर निस्कदा भित्र वसेर खायो भनेर म माथी लाठालिएर आएका छन् । त्यतिवेला ऋषीले गुन लगाउनु भएकोछ । ऋषी पनि प्रगतिशील सोच भएको व्यक्ती हो । एकपटक त प्रहरीद्वारा समातिएको छु । ने.वि. संघको वैठक कुश्मा नारायण थानमा वसेका थियौ । तयतिवेल म अध्यक्ष थिए । वैठक वसेको प्रहरीले थाहा पाएछ र हामीलाई घेरा हाल्यो , हामी भाग्यौ । भाग्दा साथीहरु त्यही वरपरका घरहरुमा पसे,म पस्न पाइन मलाई प्रहरीले समायो र खुव यातना दियो । सायद म कसैको घरभित्र पसेको भए प्रहरीले भन्दा पनि धेरै यातना पाउथे होला, दोहरो यातना । तयतिवेलार् इन्दु दाईलाई वाग्लुङ जेलमा राखेको थियो र यम शर्मालाई गोदाम थानामा राखेको थियो । यम शर्मा र म सगै वस्यौ ।
समावेशीको कुरा गर्दा समावेशी भनेको के हो -
खासगरी समावेशी भनेको राज्य संरचनाका सवै क्षेत्रमा अवसर र अधिकारको समान प्रयोग हो । अहिले सम्मको नेपालको राज्य संरचनामा अवस र अधिकारको समान वितरण भएको छैन । सम्पर्ूण्ा अवसर र अधिकारहरु अत्यन्तै सिमित जाति भनौ वा अभिजात्य वर्गको हातमा रहेको र ठूलो संख्यामा रहेको वर्ग पछि परेको वर्तमान अवस्था छ । त्यसकारण जव अवसर र अधिकारमा सवैको समान पहुँच रहने अवस्था आउछ त्यतिवेला समावेशी भएको ठान्नु पर्छ ।
के समावेशी लोकतन्त्र भयो भने सवै सन्तुष्ट रहने अवस्था सृजना हुन्छ -
समावेशी लोकतन्त्र भनेकै प्रजतन्त्रभित्र पनि हुन सक्ने कमजोरीहरुलाई समाप्त पार्ने पद्धति हो । समावेशी लोकतन्त्रको अवधारण पूरानो होइन । यो प्रजातन्त्रका विसंगतिहरुलाई समाप्त पार्ने उद्धेश्य राखेर प्रतिपादित नयाँ पद्धति हो । यसले समानुपातिक प्रतिनिधितवको सिद्धानतलाई अगाल्दछ । हाम्रो जस्तो वहुजातीय , वहुभाषीय , वहुसास्कृतिक आदि सामाजिक संरचना भएको मुलुकका लागि यो सिद्धान्त अनुकुल हुन्छ । यदि इमान्दारीपर्ूण्ा तरिकले समानुपतिक प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई अगाल्न सकियो भने सन्तुष्ट रहने अवस्था सृजना हुनसक्छ ।
के यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अगाल्न सकिन्छ त -
नसकिने कुरै छैन, सकिन्छ । हो नेपाल अल्पसंख्यका रुपमा रहेको वाहुन जातिको जातीय प्रभूत्व भएको देश हो । राज्यका सम्पर्ूण्ा संरचनाहरु यो जातिको हातमा छ । जातीय प्रभूत्वका आधारमा राज्यको संरचना कव्जा गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता अन्य तथाकथित जातहरुले लिने गरेका पनि छन् जसले क्षेत्रीय तथा आवसीय पभूत्व आफुमा भएको ठान्दछन् । दक्षिण अफि्रकामा न्यून प्रतिशतमा रहेका गोराहरुले त्यहाँको सम्पर्ूण्ा राज्य संरचनामा उनिहरुको प्रभूत्वमा थियो तर त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्था सफल भयो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई कहिले दखि सुरु गर्नुपर्छ -
जतिवेला सोचिन्छ त्यतिवेलादेखिनै सुरु गर्नुपर्छ । मुलुक संविधानसभामा जाने कुरा भएको छ , संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीलाईनै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मोडल वनाउनु पर्छ । अनतरिम संविधानमा यो कुरा समावेस हुनु जरुरी छ । अर्को कुरा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा स्पष्ट हुनु पर्ने कुरा के छ भने समानुपतिक प्रतिनिधितव दलले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा कि जाति , धर्म वा सास्कृतिक समुहको मत प्रतिशतका आधारमा - भन्नै पर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जातीय मत प्रतिशतका आधारमा हुनर्ुपर्छ ।
नभए के हुन्छ -
दर्ुभाग्य हुन्छ । एउटाले वन्दुक विसाउछ ,अर्कोले वोक्छ । अर्कोले आफ्नो अधिकार खोज्छ । अधिकार खोज्ने क्रम जारी रहिरहन्छ । अनिर् इतिहास दोहरी रहन्छ र्।र् इतिहाको पुनरावृति भैरहन्छ र्।र् इतिहासले विश्राम पाउदैन । हुने परीणम त सवैलाई थाहै भएको कुरा हो । त्यसैले अव कुनै पनि राजनीतिक दल भन्नुहोस् वा राजनीतिक सिद्धान्त भन्नुहोस् सामन्ति परम्पराका संरक्षक र नव समन्तवादका आडमा वाच्न सक्दैनन् ।
नेपाली दलितका लागि कस्तो राजनीतिक व्यवस्था हुनु पर्छ -
राजनीतिक व्यवस्था त समावेशी लोकतन्त्र नै हुनु पर्छ । यसमा राज्य संरचनामा समान प्रतिनिधित्व दिनका लागि जातीय मत प्रतिशत आधारमा वा आरक्षणको सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ । आरक्षण अनिवार्य भैसकेको छ ।
तपाईलाई मन पर्ने के हो -
तपाईलाई मन पर्ने खाना क ेहो -
खुरापात गर्न नजान्ने ।
खुसीको क्षण -
२०५४ सालमा जव राष्ट्रिय सभाको टिकट पाए र उमेर पुगेन । किनकि पार्टर्ीी उमेर नपुग्दै मूल्याङ्कन गयो ।
अन्य केही भन्नु छ कि -
मलाई ति दर्ुइ वच्चिहरुलाई भेटन मन छ । जसलाई गालि गर्दा दलितले वहुनकि छोरीलाई गालि गयो भन्ने अभियोगमा नारायण मा.वि. को शिक्षकवाट निकालिएको थिए । मलाई वाटो देखाउने तिनिहरु नै हुन् । यो २०३९ सालको कुरा हो । तिनिहरुले मलाई धेरै गुन लगाएका छन् ।